kusezandleni zikacele ukujezisa ustella - Ilanga News
Home Izindaba kusezandleni zikacele ukujezisa ustella
kusezandleni zikacele ukujezisa ustella
SEKUSEZANDLENI zikaNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele ukuthathela izinyathelo uNgqongqoshe wezokuXhumana nobuChwepheshe kuleli, uNkk Stella Ndabeni Abrahams ngokwephula umgomo wezwe wokugonqa njengoba ebonakale evakashele kwaMnu Mduduzi Manana, bedla isidlo ngoLwesibili.
Lokhu kuzwakaliswe ngumholi weDA KwaZulu-Natal, uMnu Zwakele Mncwango othe uyasihlonipha isinqumo sikaMengameli Cyril Ramaphosa sokumisa lo ngqongqoshe izinyanga ezimbili.
UNkk Ndabeni Abrahams wephule umthetho wokuvala ukusebenza ezweni ngemuva kokusabalala kwesithombe sakhe evakashele uMnu Manana onguzakwabo kwezepolitiki esigungwini esiphezulu se-ANC.
Ukusabalala kwalesi sithombe kugxekiwe ezinkundleni zokuxhumana, abanye bethi makathathelwe izinyathelo, kwazise ungumholi. Ngemuva komhlangano obungoLwesibili, umengameli uthathe isinqumo sokumisa lo ngqongqoshe. UMnu Mncwango utshele ILANGA ukuthi umengameli use-kwenzile okungasohlangothini lwakhe.
“Isitatimende sikamengameli siyakucacisa ukuthi akekho ongaphezulu komthetho. esikubonayo kwenzeka emphakathini uma ephambane nomthetho kumele sikubone kwenzeka nakungqongqoshe u-Abrahams..
“Ukumiswa emsebenzini akwanele ngoba kusobala ukuthi wephule umthetho. ungqongqoshe uCele kumele simbone ekhombisa ilaka elifanayo nakuzakwabo,” kusho uMnu Mncwango.
Exolisa ngesenzo sakhe uNkk Ndabeni-Abrahams, uzwakalise okukhulu ukuzisola ngokwenzekile, waveza ukuthi uyasihlonipha nesinqumo sikamengameli sokuba amhlalise ekhaya izinyanga ezimbili engekho emsebenzini.
Previous articlekumiswe umshumayeli obanjwe “nenkosazane” edokodweni kwashembe
Next articleUdakwe washona obezakhele utshwala ngespirithi “omile”